Politika momba ny fiainana manokana | ListaIPTVtelevision.com
IPTV M3U olon-dehibe
Ianao TV Player
Raha eto ianao dia satria te hahafantatra bebe kokoa momba ireo adidy sy zo mifanaraka aminao amin'ny maha-mpampiasa an'ity tranokala ity ianao https://listaiptvtelevision.com/ ary tena tsara izany. Ny adidinay dia ny fampahafantarana anao sy ny anao hampahafantarina tsara.
Amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia hampahafantarinay anao ny mangarahara feno momba ny tanjon'ity tranokala ity sy ny zavatra rehetra misy fiantraikany amin'ny data atolotrao, ary koa ny adidy sy ny zo mifanaraka aminao.
Mba hanombohana dia tokony ho fantatrao fa mifanaraka amin'ny fitsipika ankehitriny momba ity fiarovana data ity ny tranonkala, izay misy fiantraikany amin'ny angon-drakitra manokana omenao anao sy ny fanekenao ary ny mofomamy ampiasainay mba hampandehanana ity tranokala ity afaka mamorona ny asany.
Raha ny tokony ho izy manokana, ity tranokala ity dia mifanaraka amin'ny fitsipika manaraka ireto:
El RGPD (Ny fitsipika (EU) 2016/679 an'ny Parlemanta Eropeana sy ny filankevitry ny 27 aprily 2022 momba ny fiarovana ny olona voajanahary) izay ny lalàna mifehy ny Vondrona Eropeana vaovao izay mampiray ny fandrindrana ny fikirakirana ny angon-drakitra manokana any amin'ireo firenena eropeana samihafa.
La LOPD (Ny lalàna organika 15/1999, ny 13 Desambra, momba ny fiarovana ny data manokana y Didy faha-1720/2007, ny 21 desambra, ny lalàna mifehy ny fampandrosoana ny LOPD) izay mifehy ny fikarakarana angon-drakitra manokana sy ny adidy tsy maintsy raisin'ireo tompon'andraikitra amin'ny tranokala na bilaogy iray rehefa mitantana izany fampahalalana izany.
La LSSI (Ny lalàna 34/2002, ny 11 Jolay, momba ny Services of the Information Society and Electronic Commerce) izay mifehy ny fifanakalozana ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, toy ny hita amin'ity bilaogy ity.
Ny tahirin-kevitra omenao anay amin'ny alalanao, ary mifanaraka amin'ny fampiasana napetraka ao anatin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity, dia hampidirina ao anaty rakitra mandeha ho azy izay voasoratra ara-dalàna ao amin'ny maso ivoho Espaniola miaro ny angon-drakitra, izay tompon'andraikitra amin'izany rakitra izany dia: https://listaiptvtelevision.com/ . Midika izany fa azo antoka ny angon-drakitrao, arakaraka izay apetraky ny lalàna.
Ny angon-drakitra manokana omenao anao, miaraka amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana an-tsoratrao, dia hotehirizina ary hamboarina ho an'ireo tanjona nomena sy voafaritra eto ambany ao amin'ity politikanao momba ny tsiambaratelo ity, mandra-pahatongan'ny fotoana izay angatahinay azy hanala izany..
Mampahafantatra anao izahay fa ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia azo ovaina amin'ny fotoana rehetra, mba hampifanarahana azy amin'ny fanovana lalàna na fanovana amin'ny hetsika ataontsika, miaraka amin'ilay namoahana azy amin'ny fotoana rehetra ananan'ny tranonkala. Hampandrenesina aminao ny fanovana toy izany alohan'ny fampiharana azy.
LATSIKA MOMBA NY Fampiasana
Tokony ho fantatrao, noho ny fiadanan-tsainao, dia mangataka aminao hatrany izahay amin'ny alàlan'ny fanekena an-tsika hanangona ny angon-drakinao momba ny tanjona mifanaraka amin'ny tranga tsirairay, izay midika fa, raha manome izany fankatoavana izany ianao dia efa namaky sy nanaiky ity politikanao momba ny fiainana ity..
Amin'izao fotoana izay hidiranao sy ampiasanao ity tranokala ity, dia heverinao fa ny mpampiasa anao amin'ny zonao sy adidinao mifanaraka.
Raha mihoatra ny 13 taona ianao dia afaka misoratra anarana toy ny mpampiasa ato amin'ity tranokala ity nefa tsy nahazo alohan'ny ray aman-dreninao na mpiambina anao.
Raha feno 13 taona ianao, dia mila ny fankatoavanao ny ray aman-dreninao na ny mpiambina anao.
NY FANAVOTANA SY FANDROSOANANA NY DATA
Miankina amin'ny endrika na faritra azonao hidirana, hangatahanay manokana ireo angon-droa ilaina ho an'ny tanjona voalaza eto ambany. Amin'ny fotoana rehetra, dia tsy maintsy manome ny fankatoavanao ianao, rehefa mangataka fampahalalana momba anao manokana izahay amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Ny tanjona manokana izay aseho manokana amin'ny pejy tsirairay na ny faritra izay ahitana ny fisoratana anarana na ny fifandraisana elektronika.
Amin'ny ankapobeny, hahafahana ny fangatahana, fanamarihana, fanontanianao na karazana karazana fangatahana ataonao ho mpampiasa anao amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana hifandraisanay aminao
Raha te hampahafantatra anao momba ny fangatahana, fangatahana, hetsika, vokatra, vaovao ary / na serivisy ianao; amin'ny e-mail, fax, Whatsapp, Skype, nomen'ny finday, sms ary mms.
Ny fandefasana anao fifandraisana ara-barotra na dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika na ara-batana ahafahana mifampiresaka.
Ireo serasera ireo dia mifandraika hatrany amin'ny vokatra, serivisintsika, ny vaovao na ny fampiroboroboana, ary koa ireo vokatra na serivisy mety heverintsika fa mahaliana anao ary mety omen'ny mpiara-miasa, orinasa na "mpiara-miasa" izay anananay fifanarahana fiaraha-mientana ho an'ny fiaraha-miasa.
Raha izany dia manome toky izahay fa ireo antoko fahatelo ireo dia tsy hahazo miditra amin'ny angon-drakitrao manokana, miaraka amin'ireo fanamarihana hita taratra eto ambany, na inona na inona ataon'ireo serasera ireo. LISTAIPTVTELEVISION.COM, amin'ny maha tompon'ny tranonkala anao.
Ity tranonkala ity dia mampiseho ny vokatra avy amin'ny ankolafy fahatelo. Manokana avy Amazon.
Midika izany fa rehefa tsindrio ny "Buy Now" na ny mitovy aminy dia hitodika any amin'ny pejy anolorana ireo vokatra ianao.
Amin'ity tranga ity dia tokony ho fantatrao fa ny rohy mankany amin'ny pejy sy / na lampin'ireto antoko fahatelo ireto dia tsy maintsy vidinay, mba hanamorana ny fikarohana sy ny fahazoana azy ireo mora.
Ireo pejy mifandraika sy fahatelo ireo dia tsy nohavaozina na nofehezinay, na teo aza ny toe-javatra LISTAIPTVTELEVISION.COM ho tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranokala ireo, noho ny andraikitra azo avy amin'ny fampiasana azy amin'ny sehatra rehetra, na ho an'ny fepetra noraisina momba ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, ny fikarakarana ny angon'izy ireo manokana na ny hafa mety ho napetraka.
Noho ireo antony rehetra ireo dia manoro hevitra anao hamaky am-pitandremana sy alohan'ny fepetra rehetra momba ny fampiasana ianao, ny fividianana ny fividianana, ny fitsipiky ny tsiambaratelo, ny fampandrenesana ara-dalàna ary / na ny mitovy amin'ireo tranonkala mifandraika ireo alohan'ny hanohizana mividy ireo vokatra ireo na ampiasao ny tranonkala. .
ACCURACIE SY NY FAHAMARINANA DATA
Amin'ny maha mpampiasa anao, ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana sy ny fanovana ny data izay alefanao LISTAIPTVTELEVISION.COM , manala antsika amin'ny andraikitra rehetra amin'ity lafiny ity.
Amin'ny teny hafa, adidinao ny miantoka sy mamaly na inona na inona ny fahamarinana, ny maha-azo itokiana sy ny maha-azo itokiana ny angon-drakitra manokana omena anao, ary miasa ianao hitandrina azy ireo.
Mifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ity Politikan'olom-pirenena ity dia manaiky ianao hanome vaovao feno sy marina ao amin'ny taratasy fifandraisana na fisoratana anarana.
FIVORIANA FAHASALAMANA ARY FAHADIANA NY FIVAVAHANA
Amin'ny maha tompon'ilay angona nomenay anay, azonao atao ny mampiasa ny zonao amin'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana ary fanoherana amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka any INFO @ LISTAIPTVTELEVISION.COM ary mametaka sarin'ilay antontan-taratasinao ho porofo manamarina.
Toy izany koa, afaka misoratra anarana amin'ny fotoana rehetra ianao mba tsy hiverenanao ny vaovaontsika na ny serasera ara-barotra hafa, mivantana avy amin'ilay mailaka izay noraisinao na nandefa mailaka ho anay INFO @ LISTAIPTVTELEVISION.COM
ACCES TO DATA BY THIRD PARTY ACCOUNT
Mba hanomezana tolotra tena ilaina amin'ny fampandehanana sy fampandrosoana ny hetsik'ity tranonkala ity dia mampahafantatra anao izahay fa mizara ny angon-drakitra amin'ireto mpanome serivisy manaraka ireto eo ambanin'ny toe-piainany manokana.
Afaka matoky ianao fa ireo antoko fahatelo ireo dia tsy afaka mampiasa fampahalalana voalaza ho an'ny tanjona hafa izay tsy voafehina manokana amin'ny fifandraisantsika amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitsipika mifandraika amin'ny fiarovana ny angon-drakitra manokana.
Ity tranokala ity dia nampiantrano ny https://raiolanetworks.es/, miaraka amin'ny marika Raiola Networks, izay manome ny serivisy fampiantranoana ahafahanao miditra sy mamakivaky ny tranokalanay. Azonao atao ny manamarina ny politika momba ny tsiambaratelo sy ny lafiny ara-dalàna amin'ity orinasa ity amin'ity rohy manaraka ity: https://raiolanetworks.es/politica-de-privacidad/.
Ny tranonkalanay dia mampiasa mpizara dokam-barotra mba hanomezana votoaty ara-barotra izay hitanao amin'ny pejinay. Ireo mpizara dokambarotra ireo dia mampiasa cookies izay ahafahanao mampifanaraka ny votoatin'ny dokam-barotra amin'ny mombamomba ny mpampiasa demografika:
Google Analytics dia serivisy tranonkala analytics nomen'ny Google, Inc., orinasa Delaware izay birao lehibe any amin'ny 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Etazonia ("Google").
Google Analytics dia mampiasa "cookies", izay rakitra lahatsoratra hita ao amin'ny solosainao, mba hanampy ny tranokala hamakafaka ny fomba fampiasan'ny mpampiasa ny tranonkala.
Ny fampahalalana momban'ny cookie momba ny fampiasana ny tranokala (anisan'izany ny adiresy IP anao) dia alefa mivantana sy arak'i Google. Google dia hampiasa ireo fampahalalana ireo ho anay mba ahafahana manara-maso ny fampiasana ny tranokala, hanangom-baovao momba ny hetsika tranonkala ary hanome tolotra hafa mifandraika amin'ny hetsika tranonkala sy ny fampiasana Internet.
Google dia afaka mamita izany fampahalalana izany amin'ireo antoko fahatelo rehefa takian'ny lalàna izany, na rehefa nilaza ny antoko fahatelo ny fampahalalana ny anaran'ny Google. Google dia tsy hampifandray ny adiresy IP anao amin'ny data hafa ananany.
Amin'ny maha mpampiasa anao, sy amin'ny fampiharana ny zonao, azonao atao ny mandà ny fitsaboana ny data na fampahalalana amin'ny alàlan'ny fandavana ny fampiasana mofomamy amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny làlana mety amin'ny alàlan'ny browser, na izany aza dia tokony ho fantatrao fa raha manao izany dia mety tsy afaka mampiasa ianao ny fiasa feno amin'ity tranokala ity.
Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity, araka ny fampahalalana nomena an'ity Politika momba ny fiainana manokana ity dia ekena ny fomba ampiasain'i Google amin'ny fomba sy ho an'ny tanjona notondroina.
Raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny mandinika ny politikan'i Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
Google, amin'ny maha-mpamatsy fifandraisana azy, dia mampiasa mofomamy mba hitadiavana doka ao amin'ity tranokala ity. Azonao atao ny manalefaka ny fampiasana ny cookie DART amin'ny alàlan'ny doka Google ary miditra amin'ny politika momba ny fiainana amin'ny Internet: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
Mampiasa orinasan'ny dokam-barotra mpiara-miasa i Google mba hanompoana doka rehefa mitsidika ny tranokalanay. Ireo orinasa ireo dia mety hampiasa ny fampahalalana azony avy amin'ny fitsidihanao an'ity tranokala ity sy ireo tranokala hafa (tsy tafiditra ao ny anaranao, ny adiresy, ny adiresy mailakao na ny laharan'ny findainao) mba hiaraka aminao amin'ny doka ho an'ny vokatra sy serivisy mahaliana anao.
Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity, ekenao amin'ny fizarana amin'ny angon-drakitra ataon'i Google amin'ny fomba sy ny tanjona lazaina.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fampiasana cookies ianao sy ny fomba fanangonana fampahalalana ary ny fomba fanekena na fandavana dia jereo ny POLICY COOKIES.
Amin'ny maha tompon'ilay tranokala, LISTAIPTVTELEVISION.COM Noraisiny ny fepetra ara-teknika sy fandaminana rehetra ilaina amin'ny fiantohana ny fiarovana sy ny fahamarinan'ny angon-drakitra manokana izay alehany, ary koa mba hisorohana ny fahaverezany, ny fanovana ary / na ny fidiran'ireo antoko fahatelo tsy nahazo alàlana.
Mampahatsiahy anao izahay fa, raha mila fanazavana fanampiny, azonao atao ny miresaka amin'ny momba anay Legal filazana y Politika momba ny Cookies.
Mafana fo amin'ny ordinatera sy sinema. Injeniera informatika izay miezaka manamora ny fiainana ho an'ireo tia sarimihetsika, andian-tantara ary mijery fahitalavitra amin'ny Internet.